Qabsoon Bilisummaa Lubbuu Qaalii Wareeguu Gaafata!!!Muddee 18, 2020. – Jaawwii.org
Qabsoon Bilisummaa Lubbuu Qaalii Wareeguu Gaafata!!!Muddee 18, 2020.
Posted byBakakkaa Bonaa 18th Dec 2020 18th Dec 2020 Posted inUncategorized
Qabsoon bilisummaa sabaafi walabummaa biyyaatiif adeemsifamu gatii qaalii wareeguu gaafata. Waan roorroon jirtuuf, waan cunqursaan jirtuuf warraaqsi jirti. Waan warraaqsi jirtuuf wareegamni jirti. Waan wareegamni jirtuuf waan wareegamaniif argatuun jiraachuu shakkii hin godhatin.
Haqa ofii irratti lubbuu takkittii deebii hin qabne aarsaa kafaluun gootummaadha. Kabajaa saba ofiif jecha dantaa ofii/ka dhuunfaa gabroomsuun dirqiidha. Kunis ka akeeku warraaqaan tokko hogayyuu sirna gita bittuufi saamtuu dura haga wareegamaatti nii dhaabbata, ittiin morma.
Biyya adunyaa kanarratti sabni hiree isaan ofiin hin bulle hogayyuu gaaddisa gabrummaa aduu saafaa caalaa bobeessee nama gubu jala jiraata, tahus maqumaaf jireenya jenna malee du’a salphinaati.
Nameenyaafi qabeenyi ofii gaafa; alagaan booji’amu, Saamamuufi aggatamu eegalu sanyiin gabrummaa namarratti, lafa ofii irratti facaafame jechuu. Sanyii gabrummaa facaafame kana sirni cunqursaa kunuunsuun akka miciree guddinaa uummatu taassisa. Gaafa kana qaamni cunqursaa jala bulaa jiru dhiigni isaa ol hin adeemu, hiddi isaa nagaafi jaalala, haqaafi gammachuu sarbamuun akka sanyii kaarotii asii gadi guddina jalqaba. Kana amaleeffatee barsiifata ofii ka godhatu yoo taate xumura irratti baduuf akka jiru hegeree millachuun waan hafa hin qabne.
Gootowwan ilmaan sabaa qaroon roorroo saba isaa irratti daraartee jirtu argu aarsaa warraaqsi barbaaddu hubatee ka hiriire waan ta’eef haala akkaan rakkisaa keessa adeemuun wareegama lafeefi dhiigaa kafaluun ala filannoon ka biraa ittiin sirna cunqursaa cabsan hin jiru jedheeti amana.
Warraaqsi Galaana Ummataa Itti Fufa~ Walabummaa fi Bilisummaan Dhiigaan Dhufa!
Rakkoon Gaanfa Afrikaa eenyu?